Nitsidika ny Sinocare Inc.-News-Sinocare ny tompon'andraikitra amin'ny fitsaboana sy fahasalamana panameana
Nitsidika ny Sinocare Inc. ny tompon'andraikitra amin'ny fitsaboana sy fahasalamana panameana.
Fotoana: 2019-10-21 Hits: 209
On 12th Okt, nitsidika ny Sinocare Inc. ny tompon'andraikitra amin'ny fitsaboana sy fahasalamana panameana.
Teo ambany fampidiran'ny mpiasan'ny departemantan'ny varotra iraisam-pirenena Sinocare dia nahatakatra tsara ny momba ny fitondran-tenan'i Sinocare ny tompon'andraikitra: nanomboka ny taona 2002, nanomboka ny dianay izahay tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra diabeta mora vidy sy ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fitsaboana diabeta any Shina. Tamin'ny 2016, Sinocare dia nahazo ny Nipro diagnostic Inc. (antsoina ankehitriny hoe Trividia Health Inc.) ary ny PTS Diagnostics Inc. Ny dingana iraisam-pirenena an'ny Sinocare dia nahagaga ny namana Panameana.
Ao amin'ny sehatry ny fampiroboroboana ny vokatra Sinocare, ny andian-tsarin'ny vokatra manankarena sy ny endri-javatra vokatra lavorary dia nahaliana ny olona rehetra. Navoak'izy ireo ny telefaona findainy mba hakana sary niaraka tamin'ny andian-tsarin'ny metrôly glucose glucose ao amin'ny Sinocare sy ny vokatra POCT. Indrindra fa ny faritra za-draharaha Sinocare Minute Clinic dia nanjary faritra malaza. Ho setrin'izany, niaina dimy minitra ny tsirairay hamantatra ireo famantarana aretina mitaiza folo (siramamy ao anaty, ketônan'ny rà, asidra urika ao anaty rà, lipida-dra, hemôglôbininà glycosylated, tosidrà, BMI). Ny valim-panadinana dia naneho fa ny namana Panameana maro dia manana sanda fitadiavana lipida avo lenta na fatran'ny siramamy avo lenta, izay mifandraika amin'ny menaka avo sy sakafo matavy be.
Aorian'ny fitsidihana, oFFicials dia naneho fankasitrahana lehibe momba ny kolontsaina sy ny vokatra orinasa Sinocare, ary naneho ny tanjon'izy ireo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa: “Manantena aho fa ny firenentsika dia afaka mampiasa ireo vokatra ireo ihany koa mba hanampiana antsika hanana fitantanana fahasalamana eny ifotony tsara kokoa.”
Pejy mialoha: Sinocare dia nanatrika ny fampirantiana 'China (Hunan) Equipment and Manufacturing Entry Cambodia Investment Expo'
Pejy manaraka: Nanatrika ny MEDICAL FAIR THAILAND 2019 i Sinocare